Shir ahmiyad gaara u leh Somalia oo lagu wado inuu ka furmo magaalada London (Maxaa diirada lagu saarayaa?) - Caasimada Online
Home Warar Shir ahmiyad gaara u leh Somalia oo lagu wado inuu ka furmo...
Shir ahmiyad gaara u leh Somalia oo lagu wado inuu ka furmo magaalada London (Maxaa diirada lagu saarayaa?)
Muqdisho (Caasimada Online)-Waxaa magaalada London ku qulqulaaya Diblumaasiyiin heer caalami ah oo lagu marti galiyay shirka khuseeya Somalia ee ka furmaaya London.
Shirkan ayaa ku saabsan arrimaha bani’aadanimada Soomaaliya, kaasoo lagu lafa gurayo dhibaato kusoo fool leh dad gaaraya 2.7 million oo Soomaali ah.
Shirka ayaa waxaa marti ku ah dowlado kala duwan iyo Hay’adaha gargaarka, Soomaaliya waxaa ku metelaya wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan.
Waxyaabaha looga gol leeyahay shirka ayaa waxaa kamid ah in laga hadlo Somalia oo weli abaaro daran ay ka jiraan iyo sidii Hay’adaha gargaarka ay diirada u saari lahaayeen in ay ka hortagaan.
Shirkan oo ka furmaya xarunta Wasaaradda Arimaha Dibadda Ingiriiska ayaa waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo la xiriira sidii loo kordhin lahaa qeylo dhaanta loo sameynayo Soomaaliya iyo sidii loo qorsheyn lahaa deeqaha Soomaaliya ee 2018-ka.
Hay’adda arrimaha Qaxootiga ee laga leeyahay Norway ee NRC ayaa ka digtay in haddii aan gargaar deg deg lala soo gaarin dadkaasi ay horseedi karto xaalad macluul oo mar kale Soomaaliya ku habsata.
Dhinaca kale, Magaalada London xalay waxaa ka dhacay kulan horudhac ah oo ay isku arkeen wafdiga Dowladda Soomaaliya shirkan ku metelaya oo ay ka mid yihiin Wasiirka Qorsheynta iyo Wasiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed Ingiriiska.